Ireo mpanakanto teratany meksikàna izay mihantsy ny marika sy ny fitsaratsaram-poana. · Global Voices teny Malagasy
Zarainay ny tranombokinay ho aingam-panahy ho an'ireo mpanaingo an-tsary hoavy
Mpanoratra Isela Xospa Nandika (en) i Emma Dewick, Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 18 Febroary 2021 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Ελληνικά, English, English, Português, Esperanto , Français, Español
Ny olona avy any Malacateticpac, 2015, nataon'ny mpanoratra, Isela Xospa.
Isela Xospa no anarako ary mpanao sary sy mpanonta lahatsoratra tsy miankina aho. Ny tetikasa tefiendrika izay karakaraiko no vokatry ny dia nataoko manokana mba hitadiavana fomba hanamafisana ny maripanondroana maha-vazimba teratany (indizeny) ahy, ao anatina toe-javatra iray misy ankehitriny sy miampita firenena. Ny fahitana sy ny fanekeko ny maripanondroana maha-vazimba teratany ahy dia nanome ahy fitaovana hananganana fomba vaovao hizaràna tontolo iray izay tena voataonan'ny kolontsain'ny vazimba teratany monina ao atsimon'ny tanànan'i Mexico.
Ny alin'ny balaonina taratasy, 2019, avy amin'ny mpanoratra, Isela Xospa.
Ho an'ny Andro Erantany natao ho an'ireo Vazimba Teratany (#Díadelospueblosindígenas ) tamin'ny 9 Aogositra dia nanapa-kevitra aho ny hizara ny asan'ireo vazimba teratany tanora mpanaingo an-tsary ary zaraiko indray anatin'ity lahatsoratra ity izy ireny. Te-hanao an'io aho satria tsy dia betsaka ny mpanao sary sahy milaza fa vazimba teratany. Ny antony iray hafa dia satria, lavitra ahy ny hanao fitsaratsaram-poana fotsiny ihany, mino aho fa zava-dehibe ny famoahana ny sanganasan'izy ireo ho fihantsiana ny marika sy maripanondroana nomena ireo vazimba sy ny solontenany.
Tsy tokony ho avelantsika handalo fotsiny ireo fotoana hamerenana amin’ny laoniny ny momban’ny endrika sy ny fomba ampiasaina hanehoana ireo vondrona vazimba teratany ao anatin'ny tontolon'ny fanaingoana an-tsary. Izy ireny dia tokony hoheverina ho toy ny fotoana hikomiana mba hanoherana ny fanerena hanaiky ireo tsy tompon-tany, hampahafantarana ny fijoroantsika ara-politika ary hametrahana sosokevitra, vokatra ary hevitra hamporisihana ny famoronana fitantarana sy vakiteny vaovao nataon'ny -sy- ho an'ny mponina vazimba teratany.
Ho anay, tsy fankalazana ny endrika ivelany, fomban-drazana na tantara mahasondriana ny andro Erantany ho an'ireo Vazimba Teratany. Fa kosa, tsy maintsy ekena ny fisian'ny fanandramana voarindra hanafoanana anay sy hampiditra anay ho ao anatin'ny tetikasa Fanjakana-firenena (nation-state / état-nation), izay nitondra ho amin'ny fahaverezan'ny fiteny, faritany, fomba fitafy, fahalalana, fahasalamana ary fotoana samihafa azon'ireo vazimba teratany araraotina.
Avy amin'ilay toerana kely izay nanome aingam-panahy ny famoronanay, ny sasany aminay manana fijery politika ary ny hafa manana filàna lehibe haneho ny tenanay amin'ny fomba mazava sy hita maso, hotohizanay ny hamorona fitantaràna ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe avy amin'ny mponina tompon-tany. Manantena izahay fa ny tantaranay dia hikasika, hanova ary hisy fiantraikany amin'ny taranaka mpanao tantara an-tsary ho avy, izay miverina mankany, mampiasa ary mandray ny kolontsain'izy ireo.
Avy amin'ireo habaky ny famoronanay, zarainay aminareo ny tranombokinay .
Mitzy Juárez, mpanaingo an-tsary sy mpiangaly tefiendrika avy amin'ny foko teratany Chocholteco Ngiba any Oaxaca, atsimon'i Mexico. Tao amin'ny tanàna kely sy lavitra ao amin'ny lemaky ny faritr'i Mixteca, Oaxaca, toerana misy loharano voajanahary tsara tarehy indrindra ao amin'ilay faritra izy no teraka sy notezaina. Ny aingam-panahiny amin'ny fanaovany sary nataon'i Mitzy dia avy amin'ireo olona, ​​ny fiteny ary ireo fomba nentim-paharazana nihalehibeazany. Tamin'ny alàlan'ny fanaovana sary no nahitany fomba fitahirizana ny fahalalana izay nolovainy tamin'ny fiarahamonina misy azy—izany fahalalana izany no entiny miaraka aminy amin'izay alehany rehetra.
Ilay katsaka kely nentin'ny rivotra avy any amin'ny toeram-pambolena Milpa ho any amin'ny tanàna, miampita ranomasina sy renirano, lemaka, làlana ary tendrombohitra! (Gabriel del Río) Tchíxa io, ilay katsaka kely!!
Media sôsialy :
David Canul, el pájaro Toj (ilay vorona ‘Toj’ )
David Canul, avy amin'ny faritany Maya ao Campeche amin'ny Hoalan'i Meksika. Ny sangan'asany amin'ny maha-matihanina mpanaingo an-tsary azy dia manomboka amin'ny boky fikarohana mankany amin’ny tononkalo, votoaty ho an'ny ankizy na ny seramika ihany koa aza. Mandray anjara ihany koa izy amin'ny fandaminana, fitantanana ary fampiroboroboana ny fetiben'ny literatiora ho an'ny ankizy sy ny tanora any amin'ny Saikinosy Yucatán.
A post shared by PájaroTooj Ilustrador (@pajarotooj.ilustrador)
Teknika: loko manga sy nomerika
Singa iray miavaka amin'ny asan'i Griss Romero ny jaguar, fantatra ihany koa amin'ny hoe “tekuani” na “tigra” ary iray amin'ireo marika famantarana tena lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'i Guerrero. Mahita aingam-panahy amin'ireo fàka avy amin'ny razambe sy kolontsain'ny vondrompiarahamonina Nahua ao Acatlán i Griss. Ampiasainy ny zavakantony ho fitaovana hanentanana ny vahoaka teratany ao amin'ny fanjakan'i Guerrero any atsimo andrefan'i Meksika, ary hanehoany ny finoany sy ny fombafombam-pambolen'izy ireo.
Griss amin'izao fotoana izao dia manana sanganasa asongadin'ny fampirantiana zavakanto virtoaly ‘’Poezian'ny loko’’ ary tsy ho ela dia hisongadina ao amin'ilay fampirantiana virtoaly “AVY EO AMIN'NY VARAVARANKELIKO: Embon'ny Mpanakanto iray miaina Fihibohana”.
Cuauhtémoc Wetzka, mpamorona endrika sy mpanaingo an-tsary izay nampiranty ireo sangan’asany tany Arzantina, Kôlômbià, Espaina, Frantsa, Estonia, Polonina, Sina, Kanadà ary Etazonia. Cuauhtémoc dia avy amin'ny vondrom-piarahamonina Nahua ao Sierra de Zongolica izay hita ao amin'ny faritra afovoan'ny fanjakana Veracruz, izay manamorona ny morontsiraka Atlantika ao Meksika. Tamin'ny taona 2015, izy no nahazo ny toerana voalohany tao amin'ny katalaogy faha-25-n'ireo mpanaingo an-tsary ho an'ireo fanontàna ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe nataon'ny Filankevitry ny kolontsaina sy ny zavakanto ao Meksika. Tamin'io taona io ihany, izy koa no mpifaninana nandresy tamin'ny fifaninanana sy fampirantiana zavakanto ho an'ny ankizy nataon'ireo mpanakanto hispanika any Las Vegas, Nevada. Nandray fitenenana tamin'ny kaonferansa iraisam-pirenena isan-karazany ihany koa izy ary eken'ny rehetra ny asany natao tamin'ireo afisy vita pirinty.
Gilberto Kupyum dia avy any amin'ny Tlahuitoltepec Mixe, vondrom-piarahamonina vazimba monina any amin'ny faritra avaratra andrefan'i Oaxaca, faritra misy zavona sy ala. Ampiasainy amin'ny sangan’asany ireo lohahevitra toy ny natiora, ny lovantsofina sy mozika, izay azony tany anaty haino aman-jery isan-karazany, ohatra, ny sary hosodoko, ny fanaovana pirinty ny saripika nalaina tamina fàfana, ny fanaovana sary sokitra, ny fanontàna ampiasàna lasitra voasokitra) ary ny seramika. Gilberto Delgado no tena anarany fa Gil Kupyum na Mish Kupyum no iantsoan'ny namany azy, izay midika hoe “vorona mpandrafitra” amin'ny fiteny Ayuujk. Manohatra azy amin'io vorona io izy satria ny sary sokitra hazo no ampiasainy amin'ny fanomezana endrika an-tsary.
Miara-miasa amin'ireo vehivavy sy tanora avy amin'ny fiarahamonina misy azy ihany koa i Gilberto Kupyum. Miara-manamboatra kitapo, lobaka, kahie, fanontàna pirinty ary vokatra hafa izy ireo mba hiteraka loharanon'asa ho an'ny vondrompiarahamonina.
I Valentín Peralta Betanzos dia anisan’ny vondrona teratany Mazatec ary avy any amin'ny tanànan'i Eloxochitlán de Flores Magón, iray amin'ireo tanàna 45 mandrafitra ny faritra Cañada ao Oaxaca.
Eken'i Valentín fa ny tontolo ankehitriny no mahasarika azy ary ampidiriny ho ao anatin'ny sanganasany amin'izao andro izao ireo foto-kevitra sy fitaovana vaovao no sady ifantohany ny fahasamihafàna, satria inoany fa ny kanto dia fiteny iray ary fanehoana ny fahatsapana rehetra.
Fanomezam-boninahitra an'i Maria Sabina, vehivavy Mazatec fantatra amin'ny maha-“pretra vavin'ny holatra masina” azy. Ity no zavatra tena tiako indrindra ny manao azy… rehefa tadidinao ireo tendrombohitra feno fiainana ireo, ny olona manodidina anao, ny tarehy sy ny masonao… atao amin'ny lasitra plastika.
Haino aman-jery sosialy :
Victoria Gaspar Teodocio, vehivavy Zapotec avy amin'ny vondrompiarahamonina San Melchor Betaza ao Oaxaca. Mpanaingo an-tsary izy, nianatra momba ny Fanomezana endrika an-tsary tao amin'ny Oniversite Nasionaly mahaleotena ao Meksika. Mampiasa ny sariny amin'ny kahie natao tànana sy lasoà fanaovam-pirinty amina lafika isankarazany i Vics, ary ankafiziny ihany koa ny miasa amin'ny fakàna sary fanadihadiana sy tarehin'olona. Ireo mahery fo ao anatin'ny zavakanton'i Vic dia vehivavy maneho ny fahalalahany, ny fialamboliny ary ny fitiavan-dry zareo. Ny sary nataony dia fanomezam-boninahitra ny reniny, ny renibeny, ary ireo vehivavy rehetra izay namela dindo teo amin'ny fiainany. Mpikambana anatin'ny vondrona an-tendrombohitra antsoina hoe Dill Yel Nbán, izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fiteny Zapotec, i Vic.
Vehivavy mpitendry zava-maneno avy ao amin'ny tanànan'i San Melchor Betaza sy Villa Hidalgo Yalálag any amin'ny faritra Sierra Norte de Oaxaca. Ny mozika avy any an-tendrombohitra dia ny maripanondroana, lova, hira, hazavana, tanjaka, hasambarana, fahendrena, fahatsiarovana, dihy, io dia tantara vita petakofehy ao anaty huipil (lobaka fitafy nozarina tànana), ao anatina zipo izay tsy hitsahatra ny hiroborobo ao anatin'ilay vondrompiarahamonina.
Afrika Mainty 6 ora izay
Azia Afovoany sy Kaokazy 6 ora izay
Antsafa 18 ora izay